Indlela yokwandisa uhlu lwami lomkhiqizo ku-Amazon ukuze uthole ukuthengisa okuphezulu?
Uma kuziwa ekusebenziseni ibhizinisi lokuthumela phansi eliphumelelayo kunoma yikuphi isiteji esidumile se-ecommerce, ukufakwa kuhlu komkhiqizo okwenziwe kahle yilokho okwenza izinhlinzeko zakho zibe zikhundla ekusesheni kwamakhasimende ngaphesheya. Uhlu lwakho lomkhiqizo ku-Amazon alukona kulo mthetho. Futhi ngezansi ngizokukhombisa indlela yokusingatha ukufaneleka kwe-SEO efanele ngesinyathelo esilula ngesinyathelo sesinyathelo.
Igama elingukhiye Usesho lweMikhiqizo ku-Amazon
Ngaphambi kwanoma yini enye, ake sibhekane nayo - njengalapho inqubo ejwayelekile yokusebenza kwe-search engine (SEO), ukuthuthukiswa kwama-Amazon kokuseshwa komkhiqizo iqalisa ngokuqhuba ucwaningo oluyinhloko olujulile. Futhi ngincoma lapha ukuba ne-kickstart ngeThuluzi le-Google Keyword Planner. Ngaleyo ndlela, uzobona isithombe esikhulu somkhakha wakho womkhiqizo noma i-niche yemakethe, kanye nemigomo yokusesha oyinhloko nemishwana enomsila omude asetshenziselwa abathengi bukhoma hhayi ku-Amazon kuphela kodwa cishe wonke umuntu oseshe nge-Google search engine emhlabeni wonke - hospedagem 30 dias gratis ativação imediata. Okulandelayo kuza ukukhethwa kwakho kwegama elingukhiye ngokuqondile okuhloswe kuhlu lohlu lwe-SEO ku-Amazon. Ngincoma ukusebenzisa lapha okunye okulandelayo okucwaninga ngegama elingukhiye namathuluzi okusikisela wesikhathi sokusesha, njenge-AMZ Tracker, Ububanzi, Ama-Merchant Words, noma iScientific Seller. Zizwe ukhululekile ukukhetha noma yikuphi okukhethwa kukho ngenhla, okucacisiwe, ngoba wonke amathuluzi anemisebenzi ewusizo eqhathaniswayo ukukusiza ngegama elingukhiye elingokwezifiso elikhethiwe. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza ngokwemigomo ethengiswa ngamagama angukhiye afanelekile. Futhi kufanele ugxile kakhulu kulezi zigaba eziyisisekelo zohlu lwakho: Isihloko Somkhiqizo, Uhla Lama-Bullet Points, ne-Item Incazelo. Ngezansi ngizoba nencazelo emfushane ngayinye.
Isihloko esiyinhloko sokufakwa komkhiqizo wakho ku-Amazon yilapho uhloselwe khona ukufaka amagama amaningi okubhekisisa amagama kanye nemishwana yokucinga evame ukusetshenziswa njalo ngangokunokwenzeka. Kodwa-ke, phawula ukuthi akufanele nanini udlulele ngokuba namagama angukhiye amaningi aqoqwe ngaphesheya. Yiqiniso, uma ungafuni izenzo zakho zibhekwe njenge-spammy noma imizamo yokuqeda impela engasebenza nakwezinye izikhathi (isimo esibi kakhulu)..Ngakho-ke, cabanga ngalokhu okusikisela okulandelayo ukuze uthole isihloko sakho somkhiqizo SEO-esilungiselelwe ngendlela engcono kakhulu:
Izihloko ziyanconywa ukuba zihlale zingakapheli 200 futhi azikho izinhlamvu ezinde.
Yonke incwadi yokuqala yegama ngalinye lesihloko kufanele ifakwe emthethweni.
Izinombolo kuphela ezibhaliwe ngamanani zivunyelwe izihloko zomkhiqizo (isb., Eziyisishiyagalombili hhayi 8).
Ungafaki usayizi wento noma umbala, yiqiniso, uma kungewona impahla efanelekile.
Uhlu lwezinhlamvu zamagama
Izimpawu ze-Bullet zento kufanele zihlanzeke futhi zicacile ngangokunokwenzeka.
Ichaza izici eziyingqayizivele zomkhiqizo kanye nezakhi ezijwayelekile kakhulu zokusetshenziswa kwansuku zonke.
Ugcizelela izici eziyinhloko nezinzuzo zento.
Konke okunye okuhloswe ukuboniswa ebhokisini.
Yonke imininingwane ebalulekile mayelana nomkhiqizo kufanele ihlanganiswe ngaphandle kokukhishwa.
Amaphuzu okuqala okuphuza amakhasimende kufanele adluliselwe ngokugcwele.
Incazelo yomkhiqizo inconywa ukuba ilungiselelwe kahle amagama angukhiye omude, kanye nezicelo zomkhiqizo we-LSI ngezimo ezihambisana nesigaba sento noma i-niche.
Okuqukethwe okungafani nhlobo nokuqala kokubhala mayelana nezici ezibaluleke kakhulu zomkhiqizo KUPHELA.